ओली प्रतिगमनको गम्भीरता बुझ्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई हम्मे पर्नु विडम्बनापूर्ण - बाबुराम भट्टराई Canada Nepal
काठमाडौं - जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिगमनको गम्भीरता बुझ्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई हम्मे पर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन् ।
बिहिबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत डा. भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् ।
राजनैतिक दलहरू सत्तादोहनको भर्‍याङ मात्र बनेको बताउदै डा. भट्टराईले दल भनेकै समाजका अगुवा चेतनाका संगठित अभिव्यक्ति हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने - 'दल भनेकै समाजका अगुवा चेतनाका संगठित अभिव्यक्ति हुन् हुनुपर्छ। तर हामीकहाँ दल सत्तादोहनका भर्‍याङ मात्र बन्दैछन्। यस्तोमा सार्वजनिक वौद्धिकहरूको सक्रियता प्रशंसनीय छ ।'
उनको स्टाटस यस्तो छ - ओलीप्रतिगमनको गम्भीरता बुझ्न राजनीतिक दल/नेतालाई हम्मेपर्नु विडम्वनापूर्ण छ।दल भनेकै समाजका अगुवा चेतनाका संगठित अभिव्यक्ति हुन्/हुनुपर्छ।तर हामीकहाॅ दल सत्तादोहनका भर्यांग मात्र बन्दैछन्।यस्तोमा सार्वजनिक वौद्धिकहरूको सक्रियता प्रशंसनीय छ @sanjeevuprety
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमविरुद्ध जसपार्टी पनि सडक संघर्षमा उत्रिएको छ ।
माघ १५, २०७७ बिहिवार ०९:४४:०४ बजे : प्रकाशित